Ilekọta Archives - GELN RELRAY R .R.
ịma mma Àgwà ọma Kwụsị ịdị arọ receipts Usoro ọgwụgwọ Mmekọahụ na mmekọrịta
Hapụ ụlọ ibi ndụ ka mma
Dị ka anyị maara, ọ dị mkpa ịpụ n'ụlọ gị iji nweta ikuku ọhụrụ. Ma na nsogbu ahụike nke na-adịgide na mgbochi dị iche iche etinyebere, nke a na-esiwanye ike. N'ezie? N'ezie, anyị nwere ike ...
Nke a bụ 5 eke sikrob Ezi ntụziaka ka n'ụlọ
Nke a bụ usoro 5 maka ịkechasị osisi iji mee n'ụlọ. N'oge na-adịbeghị anya, anyị tụrụ aro ka ị chọpụta ude kachasị mma iji mee ka ị dị mma ...
Olee otú ọgụ mbufụt ndammana?
TELES RELAY	 August 30, 2020 0
Mbufụt bụ mmeghachi omume nchebe nke ahụ. A na - ebute ya ụzọ ịchọpụta ihe na - awakpo ahụ, wee kpochapụ ya. A na - egbochi nsogbu ahụ ozugbo ọ bụla egwu ahụ ...
Fọdụ ndụmọdụ iji lekọta akụrụ.
ALEXIS WAYAN	 August 14, 2020 0
Ihe nzacha a nwere ụdị agwa abụọ na - arụ ọrụ dị ukwuu n'iwepụ ihe mkpofu n'ahụ anyị. Ndụmọdụ anyị maka idebe akụrụ ike yana ... idebe ha ike! Ana m aOUụ oke ... M na-eri ...
Blueberries: ngwọta dị irè megide nsogbu ahụ ike metụtara afọ!
Maka nri ha na-acha na-acha anụnụ anụnụ, ndị sonyere riri otu iko nke 1,75 nke bluuberi ọhụrụ kwa ụbọchị, n'ụdị friza akpọnwụla akpọnwụ (19 g n'ụtụtụ na 19 g na mgbede) na mgbakwunye nri ha ...
Nke ọdịiche dị n'etiti ụlọ mposi mmiri, senti na Cologne?
bryanekobe	 Mee 11, 2020 0
Kedu ihe dị iche n'etiti eau de toilette, senti na cologne? Ihe na-esi ísì ụtọ, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ...: kedu ihe na-eme ka ngwaahịa ndị a dị iche na ihe bụ njirimara ha na ...
Nlekọta: Ugboro ole n'izu ka ị ga-asa ntutu gị?
Nlekọta: Ugboro ole n’izu ka ị kwesịrị ịsa ntutu gị? Fọdụ na-asacha ntutu ha kwa ụbọchị, ebe ndị ọzọ na-achọpụta na ncha ntutu n’otu izu, maọbụ kwa izu abụọ, ezuola. N'ezie,…